နှလုံးပိုးဝင်ခြင်း - Hello Sayarwon
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာ 24, 2020 .3mins read
လက္ခဏာလေးတွေက ဆင်တူလောက်ပါပဲ။ ဖျားမယ်၊ ရင်ဘတ်အောင့်မယ်၊ မောမယ်။ တစ်ခါတလေ သိပ်ပြင်းထန်လွန်းရင် heart attackလိုမျိုးထိ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရုတ်တရက် ဒီလက္ခဏာတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားလာရရင် ဆေးရုံကို သွားဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
နှလုံးရောင်တာတွေထဲမှာ နှလုံးအတွင်းသားရောင်ရမ်းတာက သိသာပြီး လက္ခဏာပြတာလည်း မြန်ပါတယ်။ ဒီလို မြန်မြန်လက္ခဏာပြပြီး ပြင်းထန်တဲ့ အမျိုးအစားကို ရုတ်တရက် နှလုံးအတွင်းသားရောင်ရမ်းခြင်း (acute endocarditis) လို့ခေါ်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းချင်း လနဲ့ချီ ဖြစ်တတ်တဲ့ အမျိုးအစာကိုတော့ နာတာရှည် နှလုံးအတွင်းသား ရောင်ရမ်းခြင်း ( subacute or chronic endocarditis)လို့ ခေါ်ပါတယ်။
အတွ့ရများတဲ့ နှလုံးအတွင်းသားရောင်ရမ်းတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့
အဖြစ်များတဲ့ နှလုံးအတွင်းသားရောင်ရမ်းခြင်းဟာ ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်တာများပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ မှိုပိုးကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပေမယ့် ရှားပါတယ်။
ဘက်တီးရီးယားတွေက သွေးထဲကို ရောက်လာပြီဆိုရင် နှလုံးကို ရောက်လာတတ်ပြီး နှလုံးအဆို့ရှင် ဒါမှမဟုတ် နှလုံးရဲ့ တခြားနေရာတွေမှာ တွယ်ကပ်တတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် အရေပြားပိုးဝင်တာ၊ ခံတွင်းပိုးဝင်တာ၊ အဆုတ်၊ အူနဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းတို့မှာ ပိုးဝင်တဲ့အခါ ဒီကနေတဆင့် နှလုံးကို ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သွားနဲ့ခံတွင်းရောဂါတွေရှိနေရင်၊ သွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကုသမှုတွေ လုပ်မယ်ဆိုရင် သတိထားရပါတယ်။ အခန့်မသင့်ရင် ပါးစပ်ထဲကပိုးတွေ သွေးကနေတဆင့် နှလုံးကို ရောက်လာနိုင်လို့ပါ။ တက်တူးထိုးတာ၊ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အပေါက်ဖောက်ပြီး အလှဆင်တာကလည်း ပိုးဝင်စေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နှလုံးမှာမှ နှလုံးအဆို့ရှင်တွေက ပိုးဒဏ်ကို ပိုခံစားရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူတို့မှာ သွေးကြောတွေ မရှိလို့ပါပဲ။ သွေးကြောမရှိလို့ သွေးမရ၊ သွေးမရတော့ ခုခံအားဆဲလ်တွေ လာလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် နှလုံးအဆို့ရှင်ကို ပိုးဝင်ပြီဆိုရင် ခုခံအားဆဲလ်တွေက တိုက်ပေးဖို့ ခက်ပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲက ပြင်းထန်ပြီး အခန့်မသင့်ရင် အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နှလုံးအတွင်းသားရောင်ရမ်းခြင်းကို မကုဘဲ ထားထားမယ်ဆိုရင် နှလုံးအဆို့ရှင်တွေနဲ့ နှလုံးအခန်းတွေ ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ ကုသဖို့ နောက်ကျသွားရင် ပိုးသတ်ဆေးအကောင်းစားတွေ ပေးတောင် သက်သာဖို့ မသေချာပါဘူး။
နှလုံးအတွင်းသားရောင်ရမ်းခြင်းအတွက် အဓိကကုသမှုကတော့ ပိုးသတ်ဆေးပါပဲ။ ဘာဆေးပေးမလဲဆိုတာကတော့ ဘာပိုးဝင်နေလဲပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပိုးက နှလုံးထဲမှာ ရှိနေတာဖြစ်နေတဲ့အတွက် ထိုးဆေးမှ ထိရောက်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ဆေးရုံတက်ကုသဖို့ လိုပါတယ်။ ပိုးကိုလည်း ရှာရမှာ ဖြစ်သလို ပိုးသတ်ဆေးလည်း ထိုးရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။
ပြင်းထန်လွန်းတယ်ဆိုရင်တော့ ခွဲစိတ်ဖို့လိုနိုင်ပါတယ်။ မှိုပိုးကြောင့် ရောင်ရမ်းတာဆိုရင်လည်း ခွဲစိတ်ရတတ်ပါတယ်။
နှလုံးကြွက်သားရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ နှလုံးအမြှေးပါးရောင်ရမ်းခြင်းကတော့ သူ့အလိုလို ပျောက်သွားတာ များပါတယ်။ အနားများများယူပြီး အားစိုက်တဲ့အလုပ်တွေကို လပိုင်းလောက်ရှောင်ဖို့ လိုပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲဝင်လာရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ ကုသမှုကို ခံယူရမှာပါ။
နှလုံးပိုးဝင်ခြင်းက ၃မျိုးရှိပေမယ့် လက္ခဏာလေးတွေက ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ တခြားရောဂါတွေနဲ့လည်း ခွဲရခက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက္ခဏာတစ်ခုခုကို ရုတ်တရက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားရပြီဆိုရင် မပေါ့ဆဘဲ ဆေးစစ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
နားအူ တယ်ဆိုတာ နားထဲမှာ အသံစူးစူးတွေကို ကြားနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နားအူတာက အဖြစ်များပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူကြီးတွေမှာ ပိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း, နားပြဿနာများ ဩဂုတ် 30, 2021 .2mins read